Taliyaha Booliska oo amray in si KMG ah loo xiro Xarunta CID-da
Saturday September 07, 2019 - 20:25:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib musuq maasuq iyo wax isdabamrin baahsan oo bilihii lasoo dhaafay ka jiray xarunta CID-da magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeyn albaabada la isugu dhuftay.
Taliyaha cusub ee ciidamada Booliska Dowladda Federaalka Cabdi Xasan Maxamed ayaa amar ku bixiyay in si KMG ah loo xiro xarunta CIAD-da qeybta qaabilsan bixinta warqadaha caddeymaha ee Baasaboorka lagu qaato.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha xarunta ay ku kaceen falal xatooyo ah islamarkaana ay lacago kumanaan dollar ah ka qaateen dad doonayay in ay si fudud ku helaan caddaymaha lagu qaato Baasaboorka.
Taliyaha cusub ee Booliska dowladda Federaalka ayaa lagaarsiiyay cabashooyin ka yimid xubno katirsan dowladda iyo dad caadi ah cabashadaas oo aheyd in dad badan lacago laga hormasaday loona sheegay in adeegyo loo qabanayo balse wax adeeg ah loo qaban, waxaa si KMG ah loo xiray qeybta dadka faraha looga qaado.
Wasaaradaha iyo laamaha socdaalka Dowladda Federaalka ayaa caan ku ah musuq maasuq iyo wax isdaba marin waana tan keentay in sanad walba ay dowladdan safka hore ka gasho dowladaha ugu musuq maasuqa badan caalamka.
Sarkaal katirsan Booliska oo ka badbaaday qarax ka dhacay degmada Dayniile.
Bangi kuyaal Addis Ababa oo laweeraray iyo Booliska Itoobiya oo hub farabadan qabtay.